I-15th International Conference kwi-gvSIG yaqala ngoNovemba 6, kwiSikolo esiPhakamileyo soBugcisa beGeodetic, Cartographic and Topographic Engineering - ETSIGCT. Ukuvulwa komsitho kwenziwe ngabasemagunyeni kwiYunivesithi yasePolytechnic…
I-Higher Technical School of Geodesic, Cartographic and Topographic Engineering (Universitat Politècnica de València, eSpain) iya kubamba, unyaka omnye, iNkomfa yeZizwe ngezizwe gvSIG , eya kubanjwa ukususela ngo-Oktobha 24 ukuya kwi-26 phantsi kwesiqubulo esithi "Uqoqosho kunye nemveliso. " . Ngexesha...
Sibhengeza ukuqala kwenkqubo yokubhalisa kwi-GvSIG-Training Distance Courses, kunye nokunqunyulwa kwesibini kwe-2014, eziyinxalenye yokunikezelwa kweNkqubo yeSiqinisekiso soMbutho we-gvSIG. Kumsitho weminyaka elishumi…
Ngokulindela okukhulu sibhengeza oko uMbutho we-gvSIG unxibelelane nawo: inguqulelo yokugqibela ye-gvSIG 2.0; Iprojekthi ebisebenza ngokufana nophuhliso lwe-1x kwaye kude kube ngoku isishiye sanelisekile...
Inguqulelo yesithathu ye-GIS ephathwayo sele ibhengezwe, isixhobo esayiphonononga kwiminyaka emithathu eyadlulayo, kanye njengoko kwakhutshwa inguqulelo 2 ngoJulayi 2009. Ngendlela, ndikhumbula ndibhenela kuyo emva kweentsuku...
Ukwenziwa kwamazwe ngamazwe kunye nokuxhobisa okulandelwa yi-gvSIG Foundation kunomdla. Akukho mava amaninzi afanayo, akuzange kube ngaphambili isoftware yasimahla ibe ikhulile njengoko injalo ngoku, kunye nemeko yelizwekazi lonke elabelana ngolwimi...
Namhlanje iindaba zokudibanisa iinzame phakathi kwe-i3Geo kunye ne-gvSIG zifikile, umcimbi obonakala kum njengesigqibo esibalulekileyo se-gvSIG Foundation, nangona ndiyazi ukuba kunqabile ukuba kube ngumphumo obonakalayo wawo wonke umsebenzi othathe iinyanga. ye...
Ngaphakathi kwesakhelo sokuboniswa kweMaphu yeJoloji yeZiqithi zaseCanary, iNkomfa yobuGcisa ngeXabiso loBuchule loLwazi lweNdawo iya kubanjwa. I-axis esisiseko efanayo iya kugxila kulwazi lwejografi, oluthi...
Ngezi ntsuku i-webinar kwi-gvSIG iya kunikezelwa ukuze ufunde kabanzi malunga neprojekthi. Nangona injongo eyomeleleyo yale yintengiso ethetha isiPhuthukezi kuba yenziwa ngaphakathi kwesakhelo somsitho weMundoGEO, umda wayo…
Izihloko ezingaphezulu kwe-40 ezinokwenzeka eziya kuqhutywa kwiNkomfa yeSithandathu ye-SIG Libre e-Girona ziye zabhengezwa. Mhlawumbi esinye seziganeko kumxholo we-Hispanic onempembelelo enkulu ekubonakaleni kwe-OpenSource ejolise…
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bendikuxelela ngeePilisi ze-GIS ze-Geographica, ndilandelela okwenziwa yile nkampani namhlanje, ndifuna ukukuxelela malunga nokuza kwenzeka ngo-2012 malunga neminikelo yoqeqesho ...
Kube ngunyaka osebenzayo kakhulu kwiinkomfa ze-gvSIG, siye saba ne-Italy, e-United Kingdom, eFransi-ngaphakathi kwesakhelo samazwe e-francophone-, i-Uruguay, i-Argentina kunye ne-Brazil-eLatin America-kwaye njengesithethe, i-edition Apha…
Siye saziswa ngolu phunyezo lwezicelo ze-gvSIG kwiinkqubo ezijoliswe kulawulo oluphuthumayo, ngoko ke sisasaza sikholelwa ukuba kunokuba luncedo kuninzi. IPhondo laseMendoza leRiphabhlikhi yaseArgentina, lilizwe…
I-gvSIG isandula ukupapasha ukuba ngenxa yeHlobo likaGoogle leKhowudi kwiprojekthi ye-gvSIG, iplagin ye-gvSIG ye-GGL isanda kukhutshwa. I-GGL lulwimi lwenkqubo olulodwa lwe-geoprocessing apho...